सुदुरपश्चिममा प्रचण्ड-माधवलाई ठूलो झड्का: ओली तिर लागे यी दुई मुख्य नेता – Enepali Samchar
सुदुरपश्चिममा प्रचण्ड-माधवलाई ठूलो झड्का: ओली तिर लागे यी दुई मुख्य नेता
February 9, 2021 adminLeaveaComment on सुदुरपश्चिममा प्रचण्ड-माधवलाई ठूलो झड्का: ओली तिर लागे यी दुई मुख्य नेता
e nepaalisamchaar /धनगढी, २७ माघ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र डडेल्धुराको अमगरढीका मेयर नेकपा ओली समूहमा लाग्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि कुनै पनि समूहमा नखुल्नुभएका भीमदत्तनगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र बिष्ट सोमबारदेखि ओली समूहमा खुल्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि मेयर बिष्ट ओली समूहमा खुल्नुभएको हो ।
त्यस्तै अमरगढीका मेयर बिपिन ओझालाई भने माधव प्रचण्ड समूहले वेवास्ता गरेपछि ओली समूहमा लाग्नुभएको छ । दुई मेयर नेकपा ओली समूह खुलेपछि सुदूरपश्चिम माधव प्रचण्डलाई ठूलो झड्का लागेको छ ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र डडेल्धुराको अमगरढीका मेयर नेकपा ओली समूहमा लाग्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि कुनै पनि समूहमा नखुल्नुभएका भीमदत्तनगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र बिष्ट सोमबारदेखि ओली समूहमा खुल्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि मेयर बिष्ट ओली समूहमा खुल्नुभएको हो ।
प्रचण्डका कारणले गर्दा एमसीसी पारित भएन् : सूर्य थापा (भिडियोसहित)
विप्लवसहित चार कम्युनिस्ट घटकको रणनीतिक मोर्चा, बिहिबार आन्दोलनको घोषणा गर्ने के होला अबको स्थिति ?
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :देश भरको कुन–कुन शहरमा विद्यालय बन्द ? यी सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय (पूरा हेर्नुहोस् )
सरकार भन्छ अब विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने कोही नेपाली छैन